I-TestFlight ye-macOS Manje Iyatholakala ku-Mac App Store | Ngivela ku-mac
I-TestFlight ye-macOS manje isiyatholakala ku-Mac App Store
Siyathwala iminyaka eminingana, hhayi izinyanga, mayelana nokwenzeka kokuthi inkundla ye-TestFlight itholakale ku-iOS, ibitholakala ku-Mac. Ukuqinisekiswa okusemthethweni kokwethulwa kwe-TestFlight ye-macOS kwenzeka ku-WWDC 2021. Kusukela lapho, i-Apple yethule ama-beta ahlukene alolu hlelo lokusebenza futhi amahora ambalwa isivele itholakala ku-Mac App Store.
Nge-TestFlight, abasebenzisi bangabhalisela landa futhi ufake izinguqulo ze-beta zezinhlelo zokusebenza ze-iOS, i-watchOS, i-tvOS futhi manje neye-macOS. Onjiniyela bangamema abahloli be-beta abangafika kwabayi-10.000 ngohlelo lokusebenza ngalunye futhi banikeze amandla okudala amaqembu ukuze ahlole izakhiwo ezihlukene ngesikhathi esisodwa.
Encazelweni yohlelo lokusebenza, singafunda:
I-TestFlight yenza kube lula ukuhlola izinguqulo ze-beta zezinhlelo zokusebenza ze-macOS futhi inikeze impendulo ebalulekile kubathuthukisi ngaphambi kokuthi bashicilele izinhlelo zabo zokusebenza ku-App Store. Abahloli bathola izimemo ezivela konjiniyela nge-imeyili noma ngesixhumanisi somphakathi.
Uma uhlola uhlelo lokusebenza ku-beta, i-Apple iqoqa imibiko yesiphazamisi, imininingwane yokusetshenziswa, nempendulo oyinikezayo bese iyithumela kunjiniyela. Unjiniyela angasebenzisa lolu lwazi ukuze athuthukise uhlelo lwakhe lokusebenza nemikhiqizo ehlobene. Ngokulandelayo, i-Apple ingase isebenzise imibiko yamaphutha nolwazi lokusebenzisa ukuze ithuthukise imikhiqizo namasevisi ayo.
Ukuze uthole imiyalelo yokuthi ungafaka kanjani, uhlole, futhi unikeze impendulo, kanye nemininingwane eyengeziwe yokuthi idatha yakho isingathwa kanjani, bheka testflight.apple.com.
Okokuqala ngqa ukuthi i-TestFlight ihlanganiswe neplatifomu yonjiniyela ye-Apple kwaba ekupheleni kuka-AgastiKodwa-ke, ngaphezu kwezinyanga ezi-2 kusazodlula umsamo usulungele ukuhamba.
I-TestFligt iyatholakala kuwe landa ngokuphelele ngokusebenzisa isixhumanisi esilandelayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Izinhlelo ze-Mac » I-TestFlight ye-macOS manje isiyatholakala ku-Mac App Store
13 × 10 Podcast: UKhisimusi Uqala e-Apple
I-Apple TV + ifinyelela isivumelwano esisha nenkampani yokukhiqiza iMeadowlark Media